Madaxweynihii Gobolka Amxaarada Itoobiya iyo Mas'uuliyiin kale oo ladilay.
10 qof Falasdiiniyiin ah oo ku shahiiday duqeymaha ka socda magaalada Gaza.
Video+Warbixin: Muslimiinta Hindiya oo diiday in Masjidka Babari lagu bedelo Macbad.
Mas'uuliyiin katirsan Maamulka 'Hirshabelle' oo lagu dilay Weerar ka dhacay duleedka Balcad.
Taliyihii Koontaroolka Boosaaso oo la dilay iyo maleeshiyaad hubeysan oo weerar qaaday.
Mareykanka oo Xayiraad Kusoo Rogay mid kamida Culimada ugu caansan Galbeedka Afrika.
Sunday June 23, 2019 - 09:08:09 in Wararka by Super Admin
Waxaa isasoo taraya khasaaraha ka dhashay dagaallo xooggan oo shalay ka dhacay magaalada Bahirdar ee xarunta gobolka ismaamulka Amxaarada.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sarsare lagu dilay gobolka Amhara kadib markii uu dhacay isku day ladoonayay in lagu inqilaabo maamulka taabacsan dowladda Xabashida Itoobiya.
Warbaahinta rasmiga ah ee afka dowladda ku hadasha ayaa xaqiijisay in ladilay Ambachew Mekonne oo ahaa madaxweynihii gobolka Amhara islamarkaana ay isku dhowaayeen Abiy Axmed R/wasaaraha Itoobiya.
Xaaladda wadanka Itoobiya ayaa ah mid kacsan waxaana hawada laga saaray isgaarsiinta Taleefanada iyo Aala Internetka, dhinaca kale hubanti la'aan ayaa ka taagan xaaladda uu ku suganyahay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya.
Warar soo baxay ayaa sheegayay in taliyuhu udhintay dhaawac kasoo gaaray toogasho xalay ka dhacday bartamaha magaalada Addis Ababa, Abiy Axmed ayaa goor sii horraysay xaqiijiyay in la dhaawacay Jeneraal Mykonin Syari isagoo kooxaha inqilaabka soo agaasimay ku tilmaamay calooshood ushaqeystayaal.
R/Wasaaraha Itoobiya Oo Sheegay in 86 qof lagu dilay Rabshadihii dhacay.
Dibad baxyo lagu dalbanayo in lajoojiyo Xasuuqa Soomaalida loogu geysanayo gobolka Sitti oo Jigjiga ka dhacay.
Khasaaraha Ciidamada Itoobiya kasoo gaaray Qaraxyadii gobolka Baay oo kordhay.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka Amniga gobolka Sh/dhexe oo Jowhar lagu dilay iyo Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda dilkiisa.
Zeynul Caabidiin Bin Cali Madaxweynihii hore ee dalka Tuunis oo Halaagsamay [Warbixin].
Odayaashii soo Xulay Xildhibaanada Kasoo Jeeda Maamullada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo lagusoo bandhigay degmada Buula Fulaay (SAWIRO).
06/08/2019 - 07:09:01